Uncategorized - Leading Asia Myanmar
Preparing students to be active participants inalifelong journey of learning Leading Asia Myanmar International School focuses on the development of the whole child as an inquirer, both in the classroom and in the world outside. The LAMIS’s Education Programme Addresses students’ academic, social and emotional well-being. Encourages students to develop independence and to […]
We are so excited to announce that Leading Asia Myanmar International School is going to start Online Program for 2020-2021 Academic year in December. We will open online programs for both Early Years (Nursery to KG) and PYP (Grade 1 to 5). Leading Asia Myanmar’s Online Program is … Flexible and un-stressful schedule for children […]
Today is very first day of the School. Today Leading Asia Myanmar’s Pre-KG, KG, Grade 1 and2students were enjoying their respective EAL classes, Unit of Inquiry classes and Burmese Language classes. And we are so excited to share photos of the day.
Vacancy Announcement (Burmese Language Teacher) Preamble Asacandidate school for the IB DP and on the way to becoming an IB World School, the Leading Asia Myanmar International School plans to develop intoaleading educational institute within the SE Asia region. Actively seeking PYP and DP accreditation this new school will strive to […]
Vacancy Announcement (Creativity, Activity and Service Coordinator) Preamble Asacandidate school for the IB DP and on the way to becoming an IB World School, the Leading Asia Myanmar International School plans to develop intoaleading educational institute within the SE Asia region. Actively seeking PYP and DP accreditation this new school will […]
Vacancy Announcement (Subject Teachers)
Vacancy Announcement (Subject Teachers) Preamble Asacandidate school for the IB DP and on the way to becoming an IB World School, the Leading Asia Myanmar International School plans to develop intoaleading educational institute within the SE Asia region. Actively seeking PYP and DP accreditation this new school will strive to meet […]
ဤဆောင်းပါးသည် “မဖြစ်ပျက်ဖူးသော စိန်ခေါ်မှုများ ရင်ဆိုင်နေရသည့် ပညာရေး“ဟူသော အစီအရင်ခံစာ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ အပတ်စဥ်တိုင်း အန်းန်း ဗင်ဆန်ဟာ သူမရဲ့ကျောင်းကလိုအပ်တဲ့ အဝေးမှသင်သော သင်ကြားမှုစာရင်းရှည်ကြီးမှာရှိတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုချင်းစီ ပြီးဆုံးကြောင်း အမှတ်အသားပြုရေးခြစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံး သူမဟာ သူမရဲ့ ဒုတိယတန်းကျောင်းသားကျောင်းသူ ၂၂ ယောက် စာအသံထွက်ဖတ်ပြီး ဂိမ်းကစားတဲ့ နေရာဖြစ်သော လူမှုဆက်ဆံရေးအတွက် အတန်းတွင်းအစည်းအဝေးနှစ်ခုကို အချိန်သတ်မှတ်ပါသည်။ ပြီးနောက် အုပ်စုငယ်ဖွဲ့စာဖတ်ခြင်းနှင့် သချင်္ာအတန်းများကို စီစဥ်ပါတယ်။ ထို့နောက် သူမဟာ Zoom ဖြင့် ကျောင်းသားအများကို တစ်ချိန်တည်းမှာ live stream ဖြင့် သင်ကြားပေးသော နှစ်နာရီအပြည့်ဆက်တိုက် စာသင်ကြားမှုမတိုင်ခင်မှာ ပုံမှန်ရုံးတက်ချိန်အတိုင်း အရန်သင့်အနေအထားနှင့် ထိုင်နေပါတယ်။ ရှေးရိုးစဥ်လာစာသင်ခန်းတွေမှာ အချိန်ကပုံမှန်ဖြစ်ပြီး သင်ကြားမှုကပြောင်းလဲနိုင်တယ်။ အွန်လိုင်းစာသင်ခန်းတွေမှာ အချိန်ကပြောင်းလဲနိုင်ပြီး သင်ကြားမှုကပုံမှန်ဖြစ်တယ်။ ကျောင်းသားကျောင်းသူများကို ဒဏ်ခတ်သည့်အလား သင်ခန်းစာများဖြင့် […]
သင်ရိုးပြင်ပလုပ်ငန်းများ အရေးကြီးရခြင်း၏ အကြောင်းအရင်း (၁၀)ချက် Article by Bhavana Narayan “စာအလုပ်တွေပဲလုပ်ပြီး ကစားဖို့အချိန်မပေးတာက ဂျက်ကို ဉာဏ်ထုံထိုင်းတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက် ဖြစ်သွားစေတယ်” ဆိုရိုးစကားဟာ ယနေ့ခေတ်မှာ အင်မတန် မှန်နေပါတယ်။ ဒါဟာ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ယနေ့ခေတ် ကလေးတွေဟာ “ကစားတာလျှော့၊ စာပိုလုပ်” ဆိုပြီး ဆုံးမတာပဲ ခံယူနေရပါတယ်။ ယနေ့ခေတ်ကလေးတွေဟာ အင်မတန်မြင့်မားတဲ့ ပျမ်းမျှစာမေးပွဲရမှတ် (GPA – Grade Point Averages) သို့မဟုတ် အင်မတန်မြင့်မားတဲ့ (တကယ်ကို မဖြစ်နိုင်လောက်အောင် မြင့်မားလှတဲ့) ရာခိုင်နှုန်းကို ရအောင် အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခံရပါတယ်။ ကောလိပ်တွေ၊ တက္ကသိုလ်တွေအများစုရဲ့ ကျောင်းဝင်ခွင့်အမှတ်တွေ အမြင့်ကြီးနဲ့ ဖြတ်လိုက်တဲ့ ကျေးဇူးပါလေ။ စာမေးပွဲတွေရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့ ကလေးတွေဟာ စာကလွဲရင် တခြားဘာမှ လုပ်ကိုင်ဖို့အချိန်မရှိဘဲ ခက်ခဲပင်ပန်းတဲ့အချိန်ကို ကြုံရပါတယ်။ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနဲ့ သင်ရိုးမာတိကာတွေဟာ […]
The Universe Depicted in English and Maths Languages Author: Nicole Wong (The Editor, Leading Asia Myanmar International School), translated into English by Nicole Wong A deer is drinking water. A tiger is approaching. Whenalittle bird sees that, it signals inalanguage they all understand. The deer escapes. Its life is saved. (The […]